Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): October 2012
at 10/31/2012 11:34:00 AM
Myitrum manang ni, “ Mahtai ” ngu ai M Ga shagawp gawp dat ai yaw. Chyeju shakawn ga i. M ni anhte hpe n yu kaji gwi na masai. Ya hpang de n yu roi gwi manu ga, annau ni hpe masha zawn manu tawn chye wa manu ga, KK anhte hpe Taialata na teng teng hkye la nhtawm, awndawm Shanglawt jaw sana hpe mung kam sham nga ga lu yaw.
မဟုတ်ရင်- ငါတို့ အရှုံး။
ခုတော့ - အဖြေ ရှင်းနေပြီ၊
“သွားပြီးတိုင်ပင် လိုက်ဦးမည်” တဲ့လေ…..။
(၃၁၊၁၀၊၂၀၁၂၊နံက် ၆ :ဝဝ)
ရွှေရည်စိမ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ
at 10/31/2012 11:12:00 AM
ရွှေလီမှာ တွေ့ကြပြန်တယ်။ ကတိတွေပေးသွားတယ်။ သို့သော် မထူးခြားနား ဖြစ်လာမှာပဲ၊ ဆိုပြီး အတွေ့အကြုံများတဲ့ ကေအိုင်အေ တပ်မှူးတစ်ယောက်ပြောလာသည်။
ဒီနေ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ အနေအထားကို ကြည့်လိုက်ရင် အလွတ်သဘောပုံဆောင်နေတာ တွေ့ရသည်။ လေးနက်မှု မရှိပေ။ လမ်းဘေးလူမိုက်တွေရဲ့ ရန်ပွဲဖျန်ဖြေရေး လူကြီးများပုံစံနှင့် ပိုတူသည်။ မသိနားမလည်လို့ ရန်ဖြစ်ရတာ စိတ်ငြ
ိမ်သွားရင် ရန်ပွဲရပ်သွားမယ်၊ လို့ထင်ထားပုံပါ။
တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ဟာ ရပ်ကွက် ရန်ပွဲမဟုတ်ပါ။ လူ့အသက်၊ အိုးအိမ်စည်းစိမ် မြောက်များစွာ စတေးခဲ့ရသည်။ နှစ်ပေါင်းလဲ မနဲတော့ပါ။ လက်နက်နဲ့ ဖြေရှင်းလို့ရမယ် ဆိုရင် အရင့်အရင် သူရဘွဲ့ရ ဗိုလ်ချုပ်များ လက်ထက်တွင် ပြီးနေလောက်ပါပြီ။ မပြီးနိုင်လို့သာ ဆက်ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူးက ထိုးစစ်မဆင်ပါဘူး လို့ ကေအိုင်အေ တပ်မှူးများရှေ့တွင် မဆင်မခြင်ပြောလာတော့၊ သံသယ စိတ် ပွါးပေးယုံကလွဲပြီး၊ ဘာအကျိုးမှ မရှိပါ။ ဘာသတင်းမှ မဖတ်ဘူးတဲ့လူတစ်ယောက်၊ ဘာမှ နိုင်ငံရေး မသိနားမလည်သူများကို ပြောရင် ယုံချင်ယုံမည်၊ သာမန်လူစိတ်ရှိသူ ကချင်ပြည်နယ်သားများ ဘယ်သူမှ မယုံပါ။
ကေအိုင်အေ က မိနစ်ပိုင်း၊ အချိန်တိုင်းတွင် စစ်အမိန့်များ ပေးနေရသော စစ်ဦးစီးချုပ်များကို အစည်းအဝေးမှာ မရမက လာခိုင်းပြီး။ တဖက်မှာ ထိုးစစ်ဆင်နေသည်။ ဒါတောင် ကေအိုင်အေ စစ်ဦးစီးချုပ်များ မအားမလပ်တဲ့ ကြားထဲက Webcast နဲ့ ဌါနချုပ်မှ live ကြည့်နိုင်ရင် မရမက စီစဉ်ခဲ့သည်။ ဒါက အလေးအနက်ထားတဲ့ သဘောပါ။ တကမ္ဘာ လုံးရှိ ကချင် အသိုင်းအ၀ိုင်းလဲ ကြည့်လိုက်ရသည်။ ဒီခေတ်မှာ ဘာမှ ဖုံးကွယ်ထားလို့ မရပါ။
တကယ်တော့ ကေအိုင်အေ ဆိုတာ ကေအိုင်အို ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု အောက်က လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းပါ။ စစ်ဦးစီးချုပ်များ အစည်းအဝေး တက်စရာမလိုပါ။ ကေအိုင်အိုမှ ခန့်အပ်ထားသော သက်ဆိုင်ရာ ကော်မီတီ အဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးမှာ ဆုံးဖြတ်ထားချက်သည်သာ အဓိက ဖြစ်သည်။ မြန်မာ စစ်တပ်လို အစိုးရ ရဲ့ အမိန့်ကို နားမထောင်တတ်တဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ်များ မဟုတ်ပါ။ စစ်ဦးစီးချုပ်များအနေနဲ့ ကေအိုင်အို အစိုးရ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အမိန့်ကို မလိုက်နာလို့လဲ မရပါ။
တဖက်မှာ စစ်တပ်ပိုင် မီဒီယာ ဖြစ်တဲ့ မြ၀တီ သတင်းဌာနက ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းများ စိုးစဉ်းမျှ ဖေါ်ပြခြင်းမရှိပါ။ ဒါကတော့ မြန်မာ စစ်တပ် အနေနဲ့ ကေအိုင်အေ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု အလေးမထားတဲ့ သဘောဖြစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ မဖေါ်ပြတဲ့ အပြင် ကေအိုင်အေကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အသွင်ဖန်တီးနိုင်ရန် လုပ်ကြံသတင်းများလဲ ဒီလအတွင်း ဆက်တိုက်ဖေါ်ပြလာသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်အကန်လိုချင်တယ် ဆိုရင် ရွှေရည်စိမ်အဆင့်နဲ့ မရနိုင်ပါ။ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရအုံးမည်။
One Kachinalak lai ai nsen (1)ကချင်လူငယ်ကွန်ဖရင့် မလေးရှား
at 10/31/2012 10:50:00 AM
KNG kawn interview galaw tawn ai laklai nsen madat yu ga,
Shingni ninghkring shayi Dingla seng Ja, shi hpa jaw myusha lam hta shang lawm wa ai lam madat yu ga.
One Kachin ကချင်လူငယ်များအကြား နိုင်ငံရေးနှင့် အမျိုးသားရေးအသိ ပိုမို နိုးကြားလာ,
‘One Kachin Youth Conference’ (တစုတည်းသော ကချင်လူငယ်ကွန်ဖရင့်)ကို ကြာသပတေးနေ့က စတင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ အင်္ဂလန်နှင့် မြန်မာပြည်တွင်းမှ ကချင်လူငယ် ၄ဝဝ ကျော် တက်ရောက်သည်//
Toward 2015 - 42 (Part1/2) - Reformed Burma ( video)
at 10/31/2012 09:47:00 AM
at 10/30/2012 09:25:00 AM
Myitrum manang ni, “ ဘယ်လိုလဲ ?” ngu ai M Ga shagawp re yaw. LZ makau grup-yin majan shiga zim nga ai. 28.10.2012 shana 10:00PM hta LZ hte grai ni ai kaw bom gap bun ai nsen9lang na ai gaw, anhteaTraining paeshaman shakyang ai lam she re da. Shawoi dai zawn ngoi hkra shaman ai lam n na ga ai re majaw, mare ting loi kajawng mat ai hku rai ga ai. Ya hpawng nga ai zuphpawng gaw san seng ai zuphpawng rai u ga; Kyu hpyi ga lu oi.
အမြှောက်နဲ့ပစ်မယ် - ရန်စမယ်
Kachin ကို အမြစ်ပြတ်စီမံကိန်း
KIO ဆို - ဂွင်ကျဉ်းသေး၊
Kachin ဆို - ဖျားသွားမယ်လေး……….။
(၃၀.၁၀.၂၀၁၂၊ နံနက် ၅ :၀၀)
ဟုတ်ပါ့မလား - လို့
at 10/30/2012 03:01:00 AM
Myitrum manang ni, “ ဟုတ်ပါ့မလား - လို့” ngu ai M Ga shagawp re. 30-31 ya na bawng ban hpawngamatu, KKalata hta tsepkawp ap da nna, akyu aja awa hpyi nga na re ngu kam ai yaw. Maka n kap ai M ni gale mi bai n lu rai wa mu ga; kyu hpyi shaja ra ga ai. Mana pyi 10:00 PM jan hta gade na gap dat ai kun n chye, myawk kaba nsen9lang ting LZ mare hte ani sha kaw na adan aleng na lu ga ai. Mahtai garai n na ai. Shanhte mung anhte hpe dang na matu hpan hkum, ladat hkum, shakri nga ma ai re.Bawngban hpawng ten shagu, mawplu mawpsha galaw ai; Tai niakyang hpe matsat dik ai. Raitim KK anhteamatu kaja dik ai mahtai jaw rit ga kyu hpyi ga oi.
Marit shing ran
at 10/28/2012 03:31:00 AM
Myitrum manang ni, “ Marit Shingran” ngu ai Ga shagawp hte sumla ni shagun dat ai yaw. Ndai shata 30-31 hta Shwili kaw M hte bawngban hpawng bai galaw na re nga, M nia“ Sailen nten shaya, Lagat ntsin abya” ahpyawp ai kaw n kadawng bang u ga; anhte datkasa niamatu ya kaw na akyu aja awa hpyi shaja ga lu oi. 25.10.2012 Shana de na shiga, M ni Gangdau-yang post kaw na myawk gap bun ai rai nna,3lang na kalang mi gaw sha-ityang du mat wa ai re da. Sha-ityang gaw, LZ loi sha lai ai shara re majaw, Shanhte gap dat ai myawksi LZ hpe tawt lai kau da ai masa rai malu ai; nga ma ai.
Marit Shingran Sumla ndai hpe yu,
Maning na shingran mu;
Shwili zuphpawng sa,
Htingchung hku re ai nga;
Sumla ni shagun jaw,
Ashawng hpe ga baw shaw;
“Num she raitim n hkrit,
Myusha lam gaja myit; La hte pyi shingjawng lu,
Maisau pala grai tang du;
La wangan pyi hprawng swi,
Majan hkrit ai magwi; Shi si jang ga sumpum,
Masat dingsat n hkrum; Shanglawt Tsingalupwa,
Magri sumla kaba; Masat dingsat shadun, Labau lara shalun;
Htawm na matu kasi, Yu la na jawngma ni;
Labau maumwi ntsa, Ka matsing da na yaw ya……..” da.
Oh! Kanau nang wa le……… Kana hpe tsun shagrau, Manihpa jahta kau; Ya gaw nang shawng si, Ashawng maroi nni; Laika ka na masha, Langai ‘hkawng masum sha; Nang zawn hpaji tsip, Myusha niashingnip; Kanang sa tam la na? Mat mat nit dai i……ya…… Shanglawt Tsing (27.10.2012,12:10AM)
at 10/27/2012 01:35:00 AM
By:ဖနိဒါ | သောကြာနေ့၊ အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်
ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ ကချင်လူငယ်များအကြား နိုင်ငံရေးနှင့် အမျိုးသားရေးအသိ ပိုမို နိုးကြားလာစေရန် အတွက်
နိုင်ငံတကာရောက် ကချင်လူငယ်များ ကွန်ဖရင့်တရပ်ကို မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူမြို့တွင် ကျင်းပနေကြောင်း သိရှိရသည်။
၃ ရက်တာ ကျင်းပမည့် အဆိုပါ ‘One Kachin Youth Conference’ (တစုတည်းသော ကချင်လူငယ်ကွန်ဖရင့်)ကို ကြာသပတေးနေ့က စတင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ အင်္ဂလန်နှင့် မြန်မာပြည်တွင်းမှ ကချင်လူငယ် ၄ဝဝ ကျော် တက်ရောက်နေကြသည်ဟု ကွန်ဖရင့် ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ကိုမရှော့ မုန်နန်လ က ပြောသည်။
“ဒီဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ အုပ်ချုပ်ရင် လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေး ကျဆုံးစေတယ်။ ဘယ်လို ပုဒ်မတွေက ဘယ်လို ပြောထားတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြတယ်။ ဘယ်လို ဥပဒေက တိုင်းရင်းသားတွေ သမ္မတ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ စစ်တပ်က အချိန်မရွေး အာဏာသိမ်းနိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေ ရေးထားတယ်။ စစ်တပ်ပဲ ချုပ်ကိုင်ထားနိုင်တယ် ဆိုတာတွေကို ပုဒ်မ
တွေကို ထောက်ပြပြီးတော့ ရှင်းပြတယ်” ဟု ကိုမရှော့ မုန်နန်လ က ပြောသည်။
ဘာတီးလင့်တ်နာ မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ ဘာတီးလင့်တ်နာ (Bertil Lintner) နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (အပိုင်း-၂)
at 10/26/2012 11:36:00 AM
by Yangon Press International on Monday, 22 October 2012 at 01:07 · ဝေမိုးတွေ့မေးသည်။
ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေ နေတာက ဒုက္ခသည်တွေကိုပေးမယ့် ငွေကြေးတွေမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို စောင့်မျှော်နေတာပါလို့ ရေးထားတယ်။ သူတို့မျှော်လင့်သလို၊ သူတို့ရှုမြင်ထားတဲ့ အခွင့်အရေးမျိုးကို ဒေါ်စု မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် ကချင်လူထု စိတ်ပျက်သွားတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ (မော်ကွန်းမဂ္ဂဇင်းအမှတ်(၂)တွင် ပါရှိသော အင်တာဗျူးကို ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
တကယ်လုို့ အဖြေမထွက်ဘဲ လုံးလည် ချာလည်လုိုက်နေမယ်ဆုိုရင် ၂၀၁၅ အလွန်ခေတ်ကုိုကော ဘယ် လုို မှန်းကြည့်နုိုင်မလဲ။ အစုိုးရဘက်က ကေအုိုင်အုိုလုို အဖွဲ့တွေကုို ပြောတာရှိတယ်။ နောက်သုံးနှစ်လောက်မှာ နုိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမယ် ဆုိုတာမျိုးပေါ့ ။ LINTNER:
မြန်မာအစိုးရက တောင်းဆိုမှုတွေကို အလွယ် တကူမလိုက်လျောဘူး။ သုံးနှစ်အတွင်းမှာ ဘယ်လုိုပဲ ထိပ်တုိုက် တွေ့နေတဲ့အဖွဲ့တွေကုိုဖြစ်စေ ချေမှုန်းဖုို့ လုပ်နုိုင်ပါတယ်။ နည်းမျိုးစုံကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ တိုက်မယ်၊ ဆွေးနွေးမယ်၊ ပရိယာယ် သုံးမယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက သူတို့ဘယ်လို ဖြေရှင်း ခဲ့လဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရင်၊ လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကတည်းကလို့ ပြောနိုင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုး ဖြစ်သင့်တယ်၊ ဘယ်ကိုဦးတည်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ အလေးအနက် ဆွေး နွေးဖို့ အားထုတ်ခဲ့တာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာဆို နှစ်ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်။ ပထမဆုံးညီလာခံက ပင်လုံမြို့မှာလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီညီလာခံမှာ တိုင်းရင်းသားအားလုံး မပါဝင်ခဲ့ဘူး။ ကရင်က ပင်လုံညီလာခံကို သပိတ်မှောက်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အခြားတိုင်းရင်းသားတွေ သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတယ်။ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေ ပါခဲ့တယ်။ ဒါလောက်ပဲ။ ပြဿနာပြေလည်လောက်အောင် မလုံလောက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လွတ်လပ်ရေးရပြီးတာနဲ့ တိုက်ပွဲ တွေစတော့တာပါပဲ။ ဒုတိယအကြိမ်ကြိုးပမ်းမှုက ပိုပြီးလေးနက် အရေးကြီး တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းတည် ဆောက်ပုံနဲ့ ဆက်ရှိနေသင့်သလဲဆိုတဲ့ ညီလာခံလုပ်ခဲ့တယ်။ ဦးနုက ၁၉၆၂ အစောပိုင်းမှာ ရန်ကုန်မှာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ဆွေးနွေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက ဖြစ်ပျက်နေ တဲ့ပဋိပက္ခတွေ ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ဦးနုဟာ ဖက် ဒရယ်စနစ်ကို သဘောတူပုံရတယ်။ ရှင်းလင်းပြချင်ပုံရတယ်။ အဲဒီအချိန် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသား လက်နက် ကုိုင် ပဋိပက္ခတွေနဲ့ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပါပဲ။ ဒီနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို စစ်တပ် က တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ပျက်ပြားစေမယ့် အ္တရာယ်တစ်ခုလို့ ရှုမြင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက ၁၉၆၂ မတ်လမှာ အာဏာ သိမ်းလိုက်တယ်။ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာ ပါဝင်တဲ့သူတွေကိုလည်း ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။ အဲဒီအထဲက တစ်ယောက်ပျောက်သွား တယ်။ သမ္မတစပ်ဝ်ရွှေသိုက် အဖမ်းခံရတယ်။ သုံးလအကြာမှာ သူ ထောင်ထဲမှာ ဆုံးသွားတယ်။ ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်အကြောင်း ဆွေးနွေးမှုရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်။ ဦးနေ၀င်း အာဏာသိမ်းလိုက် တာ ပြည်တွင်းစစ်ပိုပြီး အရှိန်ပြင်းသွားတယ်။
MAWKUN: ဒီအချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ ဖက်ဒရယ် အယူအဆနဲ့ အာဏာသိမ်းမှု။ အခု စစ်တပ်နဲ့အစုိုးရမှာ ဦးဆောင်နေသူတွေဟာ မဆလခေတ်ပညာရေးမှာ ကြီးပြင်းလာ ကြပါတယ်။ အဲဒါက ဘာသင်လဲဆုိုတော့ ဖက်ဒရယ်ဆုိုတာ ပြည်ထောင်စုကုို ပြိုကွဲအောင်လုပ်တာဆုိုတဲ့ သဘောပေါ့။ တချို့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေတောင်မှ ဖက်ဒရယ်ဝါဒနဲ့ပတ်သက်လုို့ မဆွေးနွေးချင်ကြဘူးလုို့ သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ ဒီလုို အမြင်မျိုးကုို ဦးနေ၀င်းက သွတ်သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလုို အနေ အထားတွေကုို ဘယ်လုိုထင်ပါသလဲ။
LINTNER: ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးရင် တိုင်းပြည် အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာကွဲသွားလိမ့်မယ်လို့ သူတို့ကကြောက်ရွံ့နေ တယ်။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ တိုင်းပြည်တွေရဲ့သမိုင်းကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအပေါ် အခြေခံထားတဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်က အတော့်ကိုနည်းပါးတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်က ဆီမီနာတစ်ခုကို ကျွန်တော် တက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဗမာပြည်အကြောင်းဆီမီနာပါ။ ဗမာပြည်ဟာ ဘာကြောင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်မဖြစ်ရတာလဲလို့ မေးတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု၊ ဂျာမန်ဟာလည်း ဖက်ဒရယ်တိုင်းပြည်ပဲ။ မလေးရှားနိုင်ငံတောင် မှပဲ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို ကျင့်သုံးတယ်လို့ပြောတယ်။ ဘာကြောင့် မြန်မာပြည်က ဖက်ဒရယ်မူကို မကျင့်သုံးနိုင်ရတာလဲ။ အဲဒီမှာ ပြောဖြစ်တာက အခု ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လို က္ဘာမှာ ရှိတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံကို မြင်တွေ့နေရတယ်။ အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုမှာ ပြည်နယ်တွေကို လူမျိုးစုနေထိုင်ရာအလိုက်ခွဲထား တာမဟုတ်ပါဘူး။ ပိုလန်ပြည်နယ်၊ ရုရှားပြည်နယ်၊ အီတလီပြည်နယ်၊ အိုင်းရစ်ပြည်နယ်၊ အင်္ဂလိပ်ပြည်နယ်ရယ်လို့ ခွဲထားတာ မရှိဘူး။ အမေရိကမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်တွေက ပထ၀ီအနေအထား ပေါ်အခြေခံပြီး ခွဲထားတာပါ။ ဂျာမန်ကိုကြည့်ရင်လည်း ရှေး ဟောင်းနိုင်ငံအပေါ်အခြေခံပြီး ပြည်နယ်ကိုခွဲထားတယ်။ မလေး ရှားဟာလည်း လူမျိုးရေးကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုပဲ။ လူမျိုး ပေါင်းစုံရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ်ပြည်နယ်၊ အိန္ဒိယပြည်နယ်၊ မလေးပြည်နယ်ရယ်လို့ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် က္ဘာမှာရှိတဲ့ လူမျိုးစုကိုအခြေခံတဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့ပြည်နယ်တွေဟာ ပြိုကွဲတာကိုတွေ့ရတယ်။ ယခင် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲသွားတယ်။ ယူဂို ဆလားဗီးယားလည်း ပြိုကွဲသွားတယ်။ အိန္ဒိယကတော့ လူမျိုး ပေါင်းမြောက်မြားစွာရှိပေမယ့် တစ်နိုင်ငံတည်းစနစ်ပါပဲ။ မြန်မာ ပြည်ရဲ့ ဖက်ဒရယ်အနာဂတ်ကို စိတ်ကူးကြည့်မယ်ဆိုရင် အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုတို့၊ မလေးရှား၊ ဂျာမနီတို့ပုံစံကို မကြည့်ပါနဲ့။ အိန္ဒိယပုံစံဟာလည်း မပြည့်စုံပါဘူး။ သူ့မှာလည်း လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားပြဿနာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြည့်ရ မယ်ဆိုရင် အမေရိကန်ပုံစံထက် အိန္ဒိယပုံစံကို ကြည့်ရလိမ့်မယ်။ MAWKUN: အတုိုက်အခံ၊ အထူးသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်နဲ့ သူ့ပါတီရဲ့တုိုင်းရင်းသားပေါ်လစီကုို ဘယ်လုိုမြင်ပါသလဲ။
LINTNER: ကျွန်တော်ကြားရတာ၊ ပြီးတော့ ကျွန် တော်နဲ့ စကားပြောခဲ့တဲ့သူတွေ ဒီလူတွေဆီက သိရသလောက်ပဲ ပြောနိုင်မှာပါ။ NLD နဲ့ (ဒေါ်)အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လူနည်း စုတိုင်းရင်းသားတွေ နေထိုင်ရာဒေသက လူတွေအများကြီးရဲ့ အကြီးအကျယ်ဝေဖန်နေတာကို ခံနေရပါတယ်။ လူနည်းစုတိုင်း ရင်းသားလား၊ လူများစုလားတော့ ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရှိတဲ့နေရာတွေဆီက ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဝေဖန်နေတာတော့သိပါတယ်။ သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာ လုံလောက်တဲ့ နားလည်ထောက်ထားမှုမရှိဘူးလို့ ဝေဖန်ခံနေ ရပါတယ်။ မကြာသေးခင်က ဥပမာတစ်ခုကို ပြောပြပါမယ်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်စဉ်ကပေါ့။ ဒေါ်စုကြည် ဘယ်ကိုသွားသွား ဧရာမလူထုကြီးက ဆီးကြိုနေတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သူမဟာ အကျော်ကြားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။ သူ ကချင်ပြည်နယ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာပေါ့။ မြစ်ကြီးနားမြို့ကိုသွားတယ်။ ခါတိုင်းလိုပါပဲ။ အဲဒီမှာသူက ကချင်ဝတ်စုံ ကိုလည်းဝတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လူထုကိုစကားပြောတယ်။ ကချင်လူထုက သူပြောဆိုတဲ့အပေါ်မှာ ကျေနပ်မှုမရဘဲ စိတ်ပျက်သွားကြတယ်။ ကချင်မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်နဲ့သိတဲ့သူတွေအားလုံး အဲဒီပွဲကို သွားကြတယ်။ သူဟာ ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ တစ်စုံတစ်ခုတော့ ပြောလိမ့်မယ်၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ဒုက္ခတွေ၊ ကချင်အပါအ၀င် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အကျပ် အတည်းတွေ၊ အတိဒုက္ခတွေအကြောင်းကို တစ်ခုခုတော့ ပြော လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကိုယ်စီနဲ့ သွားခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ။ ပြီးတော့ အဲဒီဒေသကလူတွေ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလိုချင်နေ တဲ့အကြောင်းပြောမယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ဒါတွေကိုမပြောခဲ့ဘူး။ NLD ဟာ ကချင်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်က ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီထောက်ပံ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ အဲဒီတုန်းကလား၊ တီဗီက လွှင့်တာလားမသိဘူး၊ ပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်သိတဲ့ ကချင် တစ်ယောက်က အဲဒီတုန်းက facebook မှာ ဒေါသတကြီး ရေးထားတာတွေ့ရတယ်။ သူကပြောတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေ နေတာက ဒုက္ခသည်တွေကိုပေးမယ့် ငွေကြေးတွေမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို စောင့်မျှော်နေတာပါလို့ ရေးထားတယ်။ သူတို့မျှော်လင့်သလို၊ သူတို့ရှုမြင်ထားတဲ့ အခွင့်အရေးမျိုးကို ဒေါ်စု မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် ကချင်လူထု စိတ်ပျက်သွားတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
MAWKUN: ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နုိုင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းတွေ ကုို လေ့လာကြည့်မယ်ဆုိုရင် ယေဘုယျဆန်နေတာပဲ များနေ တာတွေ့ရတယ်။ အဲဒါဘယ်လုို ထင်ပါသလဲ။
LINTNER: (ရယ်လျက်) ဒေါ်စုမှာ ဘာမူဝါဒတွေရှိလဲ ကျွန် တော်မသိဘူး။ ကျွန်တော်က သူပြောတာတွေကိုပဲသိတာပါ။ သူ့မိန့်ခွန်းတွေကိုပဲ ပြောနိုင်တာပါ။ ကချင်အများစုက သူ့ကို လေးစားတယ်။ သူ့ကိုစကားပြောချင်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ပြဿနာ တွေကို ပြောပြချင်တယ်။ MAWKUN: ဟုတ်ပါပြီ။ ဒေါ်စုမိန့်ခွန်းနဲ့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းရဲ့မိန်းခွန်းကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းက ဒေသကွဲပြားမှုအလိုက် ပြောတဲ့အကြောင်း အရာ ကွဲသွားတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ ဥပမာ-မ္တလေးမှာ ပြောတဲ့ အခါ၊ ရဟန်းတွေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကို ပြောသွားတယ်။ မန္တလေးက သံဃာတော်တွေအများအပြားရှိတဲ့မြို့ဖြစ်နေတာကိုး။ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားကျတော့ မန္တလေးနဲ့မတူ တော့ဘူး။ အဲဒီမှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်အကြောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အကြောင်းတွေကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ပြောတယ်။ ဒါ ကြောင့် သူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းတွေက ဒေါ်စုနဲ့အတော့်ကို ကွဲပြားတယ်လို့ ထင်တယ်။
LINTNER: ဟုတ်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက လူ တွေမှာ မတူကွဲပြားမှုတွေရှိတယ် ဆိုတဲ့အချက်ကို အမှန်တကယ် လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူတို့ကို အတူ တကွလက်တွဲလုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းတယ်။ သူပြောတဲ့အထဲက အထိရောက်ဆုံး မိန့်ခွန်းတစ်ခုက လွတ်လပ်ရေးမရခင်က ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ Anglo-Burmese (မြန်မာပြည်ဖွား အင်္ဂလိပ်) တွေကို ပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲဒီမိန့်ခွန်းကြောင့် မြန်မာပြည်ဖွား အင်္ဂလိပ်တွေက ၁၉၆၂ အထိ မြန်မာပြည်မှာ နေထိုင်သွားခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကပြောတယ်။ “ ကဲ . . . လူကြီးမင်းတို့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောမယ်။ ခင်ဗျားတို့မှာ နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရှိနေတယ်။ ခင်ဗျားတို့မှာ ဗမာပြည်ရှိတယ်။ ဗြိတိန် နိုင်ငံရှိတယ်။ ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရလာရင် လွတ်လပ်သွားပြီ။ ခင်ဗျားတို့မှာ ရွေးချယ်စရာရှိတယ်။ ဗြိတိသျှဖြစ်ချင်လို့လည်း ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဗမာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဖြစ်လို့ရ တယ်။ ဒီမှာဆက်နေပါ။ ခင်ဗျားတို့ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကို ဗမာနိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးမှာပါ ” မြန်မာပြည် ဖွားအင်္ဂလိပ်တွေ ရင်ထဲမှာ ခိုက်သွားတာပေါ့ဗျာ။ မြန်မာပြည်ဖွား အင်္ဂလိပ်တွေအများစုက လွတ်လပ်ရေးပြီးတဲ့နောက် ဒီနိုင်ငံထဲ မှာ သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကို မလုံမခြုံခံစားနေရတဲ့အချိန် ဖြစ်နေတာကိုး။ အဲဒီတုန်းက အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ကပြားတွေဟာ လူနည်းစု ဒေသခံတွေပေါ့။ ပြီးတော့ ဗြိတိသျှကိုလိုနီရဲ့ အကြင်းအကျန်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာတောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက နိုင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံပြီး သူတို့ကို ညီအစ်ကိုမောင်နှမရင်းချာ သဘောမျိုး ဆက်ဆံမယ်လို့ ပြောနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ကပြားတွေဟာ ဌာနတိုင်းမှာ အရေးပါတဲ့နေရာ တွေကို ရနိုင်ခဲ့ကြတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးဌာန၊ စစ်တပ်၊ လေ ကြောင်းဌာနတွေမှာ နေရာကောင်းတွေရခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီ နောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ်ရောက်လာတော့ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် လွန်ကဲမှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ ဘယ်သူက ဗမာ၊ ဘယ်သူက ဗမာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ အရေးကြီးလာတယ်။ ဗုိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအနေနဲ့ ပင်လုံမှာဆုိုရင်လဲ အသိအ မှတ်ပြုမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ ကွဲပြားခြားနားနေတဲ့လူတွေကုို တုိုင်း ပြည်အတွင်း တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် ရှိစေချင်ခဲ့တယ်။ သူက ကွဲပြားမှုတွေထဲမှာ ညီညွတ်မှုရှိတယ်ဆုိုတဲ့ အခြေခံအတွေးအ ခေါ်မျိုးရှိတဲ့ နုိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကွဲပြား ခြားနားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညီညွတ်လုို့ရတယ်ဆုိုတာမျိုးပေါ့။
MAWKUN: ဒါတွေကုိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် တုိုင်းရင်း သားအရေးဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လား။ အခုအနေအထားက သူ့အနေ နဲ့အစုိုးရနဲ့တုိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာ နေနေရတဲ့လူ (ကြားလူ) အနေအထား ဖြစ်မနေဘူးလား။
LINTNER: အနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလို သူဟာ နေရာတစ်ခုမှာ ရပ်တည်ရတော့မယ်။ အဲဒီနေရာဟာ လူကြိုက်နည်း မယ့်နေရာပေါ့။ အတိအကျတော့ မပြောနိုင်ဘူး။ တော်တော်ခက်ခဲမယ့် နေရာပဲ။
MAWKUN: တုိုင်းရင်းသားတွေ အသစ်ဖွဲ့ထားတဲ့ တပ်ပေါင်း စုအဖွဲ့ United Nationalities Federal Council (UNFC) လုို အဖွဲ့မျိုးကုိုရော ဘယ်လုိုမြင်ပါသလဲ။ ပထမမူလ စဖွဲ့တုန်းက အစုိုးရစစ်တပ်ကလာရင် အချင်းချင်းကူနုိုင်အောင် တုိုင်းရင်း သားလက်နက်ကုိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ မဟာမိတ်အဖြစ် ကေအုိုင်အုိုလုို အဖွဲ့က ရည်မှန်းခဲ့တယ်။ နောက် အစုိုးရနဲ့စကားပြောရင် တစ်ဖွဲ့ ချင်းမပြောဘဲ တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့ ပြောမယ်ဆုိုပြီး မူရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအတုိုင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး။
LINTNER: ဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခက ဗမာနဲ့အခြားလူမျိုး စုတွေရဲ့ကြားမှာပဲ ဖြစ်တဲ့ပြဿနာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလောက်ထိ မရိုးစင်းပါဘူး။ ပြဿနာအများစု၊ ပဋိပက္ခအများစုမှာ တိုင်း ရင်းသားလူနည်းစု အချင်းချင်းကြားမှာဖြစ်နေတာလည်း တွေ့ရ တယ်။ ကရင်နဲ့ရှမ်းတွေက တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက် အယုံအကြည် မရှိဘူး။ ရှမ်းပြည်မှာ ပအို့ဝ်အုံကြမှုစတာဟာ ရှမ်းစော်ဘွားတွေ ကို တွန်းလှန်အုံကြွမှုကနေ စတင်တာ။ ဒါကြောင့် ဒီပဋိပက္ခ တွေဟာ တစ်ခု၊ နှစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ဘူး။ အလွှာပေါင်းများစွာ ပါဝင်နေတယ်။ ဒါတွေကို ကြည့်ရင်တကယ့်အိပ်မက်ဆိုးပဲ။ အကြီးဆုံးပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်ကိုကြည့် ရင် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ရှမ်းတွေဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ ၄၀ ရာခိုင် နှုန်းက အခြားတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်နေတယ်။ ကချင်၊ ၀၊ တရုတ်၊ ကိုးကန့်-တရုတ်၊ လားဟူ၊ ပအို့ဝ်၊ ပဒေါင်၊ ပလောင် စသ ဖြင့် အခြားလူမျိုးတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်ဟာ လည်း မြန်မာအစိုးရနည်းတူ ပြဿနာမျိုးစုံနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအ နေနဲ့ ဗမာက ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ကျန်တဲ့လူမျိုးစုက ၄၀ ရာခိုင် နှုန်းလောက်ရှိနေလို့ပါပဲ။ ဒီပြဿနာတွေကုို ဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်း ကတော့ ဒုတိယပင်လုံလုို ညီလာခံတစ်ခုခေါ်ပြီး ဆွေးနွေးကြဖုို့ ပါပဲ။ ပြီးတော့ တုိုင်းရင်းသားအားလုံး သဘောတူတဲ့ အခြေခံဥပ ဒေအသစ်တစ်ခုကုို ရေးရပါမယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အမြင် ကတော့ မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ တုိုင်းရင်းသားပြဿနာတွေရဲ့ ဇာစ်မြစ်ကုို မဖြေရှင်းနုိုင်သရွေ့ ပဋိပက္ခတွေ ဆက်ရှိနေပါမယ်။
MAWKUN: မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကရော ဘယ်လို လဲ။ ဒါလည်း ဆက်စပ်နေမယ့် ပြဿနာတစ်ခုပဲမဟုတ်လား။
LINTNER: မြန်မာပြည်ရဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှု ပြဿနာက ပြည်တွင်းစစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ တိုက်ရိုက်ရလဒ် တစ်ခုပါပဲ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုက ဗြိတိသျှတွေ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုကျယ်ပြန့်လာတာဟာ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွေမှာ စခဲ့တယ်။ နောက် ၆၀ ခုနှစ်တွေ၊ ၇၀ ခုနှစ် တွေအထိ အများအပြားထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဘိန်းထုတ်လုပ်မှုအကြောင်းအရင်းက အာဖဂန်နစ္စတန် လိုပါပဲ။ စစ်ပွဲကြောင့်လို့ ပြောရမယ်။ ဥပမာတစ်ခုပြရရင် ကိုးကန့် ပေါ့။ ကိုးကန့်ဒေသက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကောင်းဆုံးလက်ဖက် ထွက်တယ်။ ကိုးကန့်လက်ဖက်ဟာ နာမည်ကြီးတယ်။ လက်ဖက် ဟာ ကိုးကန့်ဒေသအတွက် အဓိက၀င်ငွေရသီးနှံပါပဲ။ အဲဒီဒေသ မှာ စပါးမစိုက်ပျိုးတဲ့အတွက် ကိုးကန့်တွေအတွက် စားရေရိက္ခာ ၀ယ်ဖို့ ငွေရမယ့်သီးနှံ စိုက်ပျိုးဖို့လိုပါတယ်။ အတိတ်ခေတ်ကာလ ကတော့ သူတို့ လက်ဖက်ရောင်းဖို့ လားရှိုးကို ဆင်းလာလေ့ရှိပါ တယ်။ ဒါကြောင့် လားရှိုးမြောက်ဘက်က အဓိကစစ်ဆေးရေး ဂိတ်ကို AT ဂိတ်လို့ခေါ်ကြတယ်။ AT ဟာ ဘာကိုပြောသလဲ အခုလူတွေ သိပ်မသိကြတော့ဘူး။ AT က Animal Transport ကို အတိုကောက်ခေါ်တာပါ။ ရုတ်တရက် အဲဒီနေရာဟာ စစ်ပွဲ ဇုန်တစ်ခု ဖြစ်လာတယ်။ ဒီနေရာကို ငွေကြေးနဲ့ဖြတ်သန်းရတာ မလုံခြုံတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီဒေသကလူတွေက ဘိန်းကို ပြောင်းစိုက်ကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လားရှိုးကိုဆင်း လာပြီး ရောင်းစရာမလိုတော့တဲ့အတွက် ကြောင့်ပါပဲ။ ဘိန်းကုန်သည်က ရွာကိုလာပြီးဝယ်တယ်လေ။ အာဖဂန် မှာလည်း အလားတူပြဿနာမျိုးပါပဲ။ စစ်ပွဲကြောင့် ပုံမှန်သီးနှံ တွေစိုက်ပျိုးရောင်းချဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခါ ဘိန်းကိုပြောင်း စိုက်ကြတာပါပဲ။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဘိန်းကိုစိုက်ပျိုးတာ အခြားသီးနှံတွေထက် လွယ်ကူတယ်။ ဘိန်းဝယ်မယ့်လူက ကိုယ့် ဆီကို အရောက်လာတယ်။ သွားရောင်းနေစရာ မလိုဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကို ပလောင်ဒေသမှာလည်း မြင်တွေ့ နေရတယ်။ နမ့်ဆန်ဒေသတွေမှာ အဲဒီလို ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ ကူမင်တန် ဗိုလ်ချုပ်စကားပြောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်။ သူကပြောတယ်။ ကွန်မြူနစ်စနစ်ရဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးကိုတိုက်ဖို့ အတွက် ငါတို့မှာ စစ်တပ်လိုတယ်။ စစ်တပ်ဆိုတာ လက်နက်လို တယ်။ လက်နက်ဝယ်ဖို့အတွက် ငွေလိုတယ်။ ဒီတောင်တန်းမှာ ငွေရမယ့်နည်းလမ်းက ဘိန်းစိုက်တာပဲတဲ့။
မြန်မာပြည်ရဲ့ တုိုင်းရင်းသား ပြဿနာတွေ ပပျောက်သွားဖုို့ အဖြေကရော။
LINTNER: အဖြေကတော့ ပင်လုံလုိုမျိုး တုိုင်းရင်းသား အားလုံးပါဝင်နုိုင်တဲ့ ညီလာခံတစ်ခုနဲ့ တုိုင်းရင်းသားအခွင့် အရေးတွေကုို အာမခံနုိုင်တဲ့ အခြေခံဥပဒေဖြစ်ဖုို့ပါပဲ။
at 10/26/2012 10:25:00 AM
PSY - GANGNAM STYLE American gangnam style Mitt Romney Style (Gangnam Style Parody) Obama Style (Psy Gangnam Style Parody) Feat. Smooth-E and Alphacat 강남스타일
(52) ning hpring, KIO Masat N'htoi htaeGinjaw Komiti Tingnyang Up Salang Lanyaw Zawng Hra kaw nna numhtet shatsam ai mungga.
at 10/26/2012 08:57:00 AM
READ MORE http://kachinnet.net/news/484-52-ning-hpring-kio-masat-n-htoi-hta-e-ginjaw-komiti-tingnyang-up-salang-lanyaw-zawng-hra-kaw-nna-numhtet-shatsam-ai-mungga.html
KIO/ masat ning htoi Video Kachin song
at 10/26/2012 08:55:00 AM
Maroi nni ai
at 10/26/2012 07:42:00 AM
Myitrum manang ni, Yawn shawai dani Sau Ka-mai n nga mat ai bat mi tup rai sai.Maroi Nni dik let, Shi hpe ga shagawp bai gawp dat sai. Nachying myit n pyaw ai yaw. M niashamu shamawt ai lam gaw hkrit tsang hpa rai nga ai. Mana de jan du wa ten JIC ni nawku ku nga yang( vespers service ten) Dawhpumyang maga de na M ni gap dat ai myawksi kaba langai, Sha-it yang Jawngma hpyendap post makau de hkrat wa ai lam na lu ai. Dai maga de Laiza wanjak kaba nga ai re majaw, dai hpe shading ai lam dan leng nga ai. Akyu hpyi shaja ga lu oi; tsang hpa kaba re.
Marit shingran la ai goi!
Maroi nni dik ai oi!
Yinam bat ni woi mat wa,
Nshung Sama du di nga;
October shata 19,
Nang hpe mara shagun m’yu;
Laban hpang manga ya,
Nhtoi wa mi gaja ja;
Kalang lata galai shai,
Katsan ga de shadu ai;
Sidue……… Kadai shangun ai rai ta?
Tsadan hkawhkam n re hka?
Shi wa mara she kata,
Manu dan dik ai masha;
Shi hpe adawt sat malai,
Ka-niya 10 sat yang mai;
Masha shut nit dai i ya…..
Sau Ka- maiagam maka;
Shanglawt Tsing grai myit kaji,
Maroi nni gin n di;
Padang Hkrun lam jawm hkawm sa,
Annau ni lahkrip ra ra;
Tai hpe rau rau jawm adawt,
Myusha lam-yan jawm shamawt;
Yehowa Awmdawm jaw na,
Annau ni jawm myit mada;
Shakut shaja nga ding-yang,
N myit mada ai manghkang;
Annau ni hpe jahka kau,
Tai ni kabu she n rau;
Masin nsi dik nngai…….
Maroi nni dik mat sai……
Malaysia na ram ma hpawng
at 10/26/2012 02:11:00 AM
At Bayu Beach Resort, Port Dickson.
Rev.Dr.Maran Ja Gun 21Oct,2012, At Kachin Church Bangkok
at 10/25/2012 09:43:00 AM
at 10/25/2012 09:36:00 AM
Myitrum manang ni, “ Lahpawt Lama ” ngu ai Ga shagawp gawp dat ai yaw. Daini gaw, Laiza Ginjaw shara, “ Rawt Ninghkawng” gawknu kaw, KIO Party byin wa ai nhtoi 52 ning hpring masat dingsat Mungshawa hkaw tsun hpawng galaw na hkyen lajang da nga ga ai. 11:00 AM hta hpang na re. Laiza mare na Mungshawa masha ni hte Hpyen-yen ni, Magam gun ni, Jawngma ni marai 2000 daram du sa madat hkam la na re lam shana dat ai. Yahte gaw LZ grup-yin majan zim nga ai. Kyu hpyi n malap ga lu yaw. Hpa mi she bai byin wa na kun? N dang chye tsun ai.
Myutsaw Brang Hpauwung Tang,
Tsalam sh’dang hpring byin ai nang;
Mediaamajan pa,
Shawnglam de sha shanang sa;
Shiga kahtet sagawn la,
Internet hte shabra da;
Larau ladau laika ngau,
Shani shana ka n rau;
Ningka mying ni grai makoi,
Sau Ka-mai sha yawng chye loi;
Tai ni hpe grai lu adawt,
Kachin hkra jang nang grai pawt;
Ingalikga Jinghpaw Myen,
Laika ka yang ding-yang hkren;
Sumrai sumroi ga shagawp,
Labau lara mahkra nyawp;
Mahkawn mangwi htuk shamwi,
Senhkum mahkawn ai yu ngwi;
Bawnu nyan mung gaja hpring,
Mungmasa lam gaja ing;
Computer mung grai pakker,
Hpaji prat dep Jinghpaw la;
Makam masham lam mung greng,
Wunpawng ga mung grai she zeng;
Myusha lam- yan myit maju,
Galoi raitim n masu;
Wunpawng myutsaw myit kaba,
Nachying wa lahpawt lama……….
မြန်မာ စစ်အစိုးရ၏ မဟာဗျူဟာမြောက်အစီအစဉ်တွင် ဒေါ်စု ကဏ္ဍ
at 10/24/2012 10:45:00 AM
by Duwa Kachin on Tuesday, October 23, 2012 at 10:47pm ·
စစ်အစိုးရ၏ လျှို့ဝှက်အစီအစဉ်တွင် ဒေါ်စု ပါဝင်ပတ်သက်မှု ကဏ္ဍ အကြောင်းကို စာရေးသူအနေနဲ့ နောက်ကြောင်း အဖြစ်အပျက်များ နှင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်မှု နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းများအပေါ် သုံးသပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေး အဖွဲ့များတွင် နိုင်ငံရေး နှင့် စစ်ရေး အခိုင်မာ ဆုံးနှင့် ဘာသာရေး အရ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု အများဆုံးမှာ ကရင် နှင့် ကချင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် လွန်ခဲ့သော ၁၉၉၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းမှ စ၍ KNU နှင့် KIO ကိုသီးသန့်စီ ခွဲထုတ်ပြီး ထိုးစစ်ဆင်ရန် စစ်အစိုးရရဲ့ အဓိက ပစ်မှတ် ဖြစ်လာသည်။
၁၉၉၀ ကျော် တုန်းက KNU နှင့် KIO နှစ်ဖွဲ့စလုံး အပစ်ရပ်အတွက် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ KNU ဆိုရင် ရန်ကုန်ထိတောင် သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သေးသည်။ သို့သော် အပစ်ရပ် လက်မှတ်ထိုးတဲ့ အဆင့် အရောက်မခံခဲ့ပါ။ နောက်တော့ KNU ကိုအကြီးကျယ်ဆုံး ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ ထိုင်းနယ်စပ် တလျှောက် စစ်ပြေးဒုက္ခသည် စခန်းပေါင်းမြောက်များစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၄င်း ဒုက္ခသည် စခန်းများပြင်လျှင် ကေအိုင်ယူ အတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်နေခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စ၍ KIO ဖက် ပစ်မှတ်ပြောင်းသွားသည်။ အမှန်ဆိုရင် KIO ဟာ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို အပြည့်အ၀ မထောက်ခံခဲ့ပေမယ့်၊ နောက်နောင်အခါ ပါတီ နိုင်ငံရေးအရ ပြုပြင်နိုင်ဖို့ မျော်လင့်ခဲ့သည့်နည်းတူ၊ ပါတီဖွဲ့ရန် စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော် နိုင်ငံရေးအရ စိတ်ချနိုင်တဲ့ အနေအထားအဆင့် မရောက်သေးပဲ လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့လောက်ထိ အတင့်မရဲခဲ့ပါ။ ထို့အတူ ကေအိုင်အေ အပါအ၀င် ကချင် ခေါင်းဆောင် အစစ်အမှန်များ ပါဝင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော KSPP ပါတီလဲ မှတ်ပုံတင် ကျမလာပါ။ (အခုမှ ပါတီနိုင်ငံရေး ကို လက်ခံဖို့ ကေအိုင်အေ ကို ၀ိုင်းပြောနေကြပါတယ်၊ ကေအိုင်အေ အနေနဲ့ အစကတည်းက လက်ခံပြီးသား ဆိုတာ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူများ သိပါတယ်။)
ထို့ကြောင့် ၂၀၀၈-၂၀၁၁ ကြား ကေအိုင်အိုကို BGF လက်ခံရန် နောက်ဆုံးရက်သတ်မှတ်ချက် ရာဇသံ အကြိမ်ကြိမ်ပေးခဲ့သည်။ ကေအိုင်အို အနေနဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ် လက်ခံမှာမဟုတ်မှန်းလဲ ကြိုတင်တွက်ထားပြီး ဖြစ်၍ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စစ်ရေး ပြင်ဆင်လာသည်။ ကရင်၊ ၀ နှင့် ကချင်တော်လှန်ရေးကြား ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းဖြစ်သည့် ကိုးကန့် နယ်ကို အကြောင်းရှာပြီး သိမ်းလိုက်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း လက်နက်ကြီးအများအပြား မန္တလေး-ဗန်းမော်လမ်းမှ တဆင့် လိုင်ဇာအနီးမှ ဖြတ်ပြီး ပို့လိုက်သည်။ ချိန်းချောက်တဲ့ သဘောလဲ ဖြစ်သည်။ ထိုချိန်က ဗန်းမော်တွင် ကချင် နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဓမ္မ ညီလာခံ ကျင်းပ နေချိန် လူထု သောင်းချီ စုဝေးရာ အနီးမှ ဖြတ်ပြီး လက်နက်ကြီးများ ပို့ဆောင်ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်ကတည်းက ကေအိုင်အေလဲ ခံစစ်အတွက် ပြင်ဆင်နေခဲ့သည်။သတင်းများမှာလဲ လိုင်ဇာကို ထိုးစစ်ဆင်ရန် အသင့် ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် နီးစပ်သော မိသားစုများထံမှ ခိုင်လုံတဲ့ သတင်းများအရသိရသည်။ တချိန်ထဲမှာ အရပ်သားစီး ရထားမှ စစ်ကူအများအပြားကို ပို့ဆောင်လာသည်။
ထင်ထားသည့်အတိုင်းပင် ၂၀၁၁ ဇွန်လမှာ စပြီး တိုက်ခိုက်သည်။ တချို့က တရုတ်လုပ်ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကြောင့်လို့ပြောကြပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကြောင့် ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင် လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ် စီမံကိန်း စလာကတည်းက ဖြစ်ရမှာပါ။ စစ်ပွဲများစတင်ရာမှာ မတော်တဆ ထိတွေ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်ပေ။ လက်နက်ကြီးအများအပြား နှင့် အနောက်ကနေ ပစ်ကူပေးသလို၊ ဗျူဟာမှူးကိုယ်တိုင် စီမံခန့်ခွဲပြီး စစ်ကြောင်းနှင့်တိုက်ခဲ့သော တိုက်ပွဲမှ စလာခြင်းဖြစ်သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လိုင်လ မှာတော့ ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့်ထပ်တွေ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှ ကိုးကြိမ်မြောက် တွေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်စု မျက်နှာ မချိုမသာ ဖြစ်နေခဲ့တာ သတိထားမိသည်။ သို့သော် အများပြည်သူအတွက် အကျိုးရှိမဲ့ အရေးကိစ္စအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်တယ် လို့ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ ဘယ်လို အကျိုးဆိုတာ သိသိကျကျ မထုတ်ပြန်ခဲ့ပေ။ အခုထိလဲ မရှင်းပြသေးပေ။
၂၀၁၁ သြဂုတ်လ တွင် ထပ်မံ ဦးအောင်ကြည်၊ သမ္မတ သိန်းစိန်တို့နှင့် တွေ့ရာမှာ တော့ ဒေါ်စု နှင့် NLD ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ပိုသေချာသွားသည်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကြောင့် ဘယ်လိုမှ ဒေါ်စု နှင့်အဖွဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးပေး။
နောက်တော့ မဖြစ်ဖြစ်တဲ့ နည်းနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် စီစဉ်ပေးသည်။ နိုင်ငံတကာ နှင့် နိုင်ငံရေး အကဲခတ်များ နှစ်ထောင်းအားရ ဖြစ်သွားသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာက ဒေါ်စု မဲဆန္ဒနယ် ရွေးရခြင်းကစလာသည်။ ကရင် ရပ်ကွက်ကို ရွေးခဲ့သည်။ တဖက်မှာ KNU နှင့် အပစ်ရပ်ဖို့ ကမ်းလမ်းမှု စလာသည်။ ကချင်ကို စတိုက်နေပါပြီ။ BGF လက်မခံတာ ကေအိုင်အေတစ်ဖွဲ့ထဲ မဟုတ်ခဲ့ပါ။ မွန်အဖွဲ့၊ ၀ အဖွဲ့၊ ရှမ်းအဖွဲ့ အားလုံးဖြစ်သည်။
ဒေါ်စု ရွေးကောက်ခံပြီးနောက် ပထမဆုံး နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးမှာ ကရင် ဒုက္ခသည် စခန်းကို သွားခဲ့သည်။ ကေအင်ယူ နှင့် အပစ်ရပ်ရေးကိစ္စ ပိုသေချာသွားသည်။ တဖက်မှာ ကချင်ကို ထိုးစစ်ဆင်တဲ့ ကိစ္စ ဒေါ်စု အနေနဲ့ စိုးစင်းမျှ ထုတ်ဖေါ်ပြောခြင်းမျိုးမရှိလို့ နိုင်ငံတကာမှာတောင် ဝေဖန်သံများ ဆူညံနေခဲ့သည်။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာက ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာများ မဖတ်တာတော့ မဖြစ်နိုင်ပေ။
သို့သော် ဒီအချိန်မှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အဓိက အင်အားကြီး တိုင်းရင်းသား အတိုက်အခံ အဖွဲ့ နှစ်ခုကို ဖြိုရာမှာ အရေးကြီးသော မဟာဗျူဟာ အတွက် ဦးအောင်ကြည် နှင့် သမ္မတ ကိုတွေ့ကတည်းက "အများပြည်သူ အတွက် အကျိုး" ဆိုတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အများပြည်သူ ဆိုတဲ့ အချက်ကို ကောင်းကောင်းဆက်စဉ်းစားလိုက်လျှင် ဗမာ လူမျိုးများအတွက် ဆိုရင် ပိုမှန်သွားသည်။ မြန်မာ အစိုးရ ရဲ့ ထိုးစစ်ဟာ တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ကို တိုက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေ၊ ကရင်၊ ကချင် ရွာများကို အခြေချနေထိုင်မှု အားလုံး ဖျက်ပေးသော တိုက်စစ်ဖြစ်သည်။ လူမျိုးရေး ထိုးစစ်ဆင်မှု ဗျူဟာ ဖြစ်သည်။ လူမျိုးတမျိုးကို လုံးပါးပါးသွားအောင် တိုက်သော ထိုးစစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဒေါ်စု အနေနဲ့ သူ့စိတ်မနော အရ လက်မခံချင်သော်လည်း၊ သူလဲ သူ့လူမျိုးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဆုံးဖြတ်ဖို့ ၀န်လေးမည် မဟုတ်ပေ။ ဒီအတွက်လဲ မြန်မာ အစိုးရ အတွက် ကံကောင်းခြင်းဆု အများအပြား ရလိုက်သည်။ နိုင်ငံတကာက မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ အပြောင်းအလဲ အတွက် အသိအမှတ်ပြုလာသည်။
ဗမာ့နိုင်ငံရေး လောကကို တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ စပြီး ချဲ့ထွင်လာတဲ့ အချိန်မှ စပြီး တိုင်းရင်းသားများကို အကြပ်ရိုက်စေမဲ့ နည်းဗျူဟာများ သုံးနေခဲ့သည်။ တဖက်တွင်လဲ ဗမာ နိုင်ငံရေးလောက ကိုပိုမိုချဲ့ကားစေသည်။ ဒီလိုဗျူဟာ သဘောအရ NLD နှင့် ဒေါ်စုသည်လဲ တဖက်တလမ်းမှ ပါဝင် ပတ်သက်ဖို့ ဖြစ်လာသည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ ကရင်၊ ချင်း နှင့် ကချင်လူမျိုးများအတွက် အဓိက ပညာရေးသွေးကြော ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သာသနာပြုကျောင်းများကို ဖြုတ်သိမ်းပြီး၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းပညာရေးကိုတော့ ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့် ပေးခဲ့တယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ပညာရေးလဲ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ရင် mission school ပါပဲ။ အခု အစိုးရ သစ်မှာ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပြဠာန်းတော့ mission ကျောင်းများ မဖြစ်ရ၊ လို့ ထည့်ခဲ့သော်လဲ၊ ဘုန်းတော်ကြီး ပညာရေးကျောင်းကိုတော့ အားပေးတယ်။ ဒါဟာ ခရစ်ယာန်အခြေခံ တိုင်းရင်းသားများကို အထူးပစ်မှတ်ထား နေကြောင်းပေါ်လွင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၀ တပ်ဖွဲ့ဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် အလိုလိုက်ထားခြင်းခံရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ခရစ်ယာန် မဟုတ်ခြင်းက တကြောင်း၊ ရှမ်း ပြည်နယ် ခွဲထွက်ရေးအတွက် အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ခြင်းလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာတော့ ကချင်လူမျိုးများ ခံရမည့်အလေ့လို့ ဆိုရင် မမှားပေ။ မခံနိုင်တဲ့ အဆုံး အရှုံးပေးရင် တိုင်းရင်းသားများ၏ မူလ ရပိုင်ခွင့်များ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းအရ ဖြစ်လာနိုင်စရာရှိသလား ဆိုတော့ မဖြစ်နိုင်ပေ။ NLD ရဲ့ လွမ်းမိုးမှုသည်၊ ပြည်နယ်တိုင်းတွင် ရှိလာသည်။ လက်နက်ချလဲရှုံးမှာသာ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်ပြဠာန်းခွင့်အတွက် အာမခံ ချက် မရသေးသ၍ တိုင်းရင်းသား ပြည်နယ်များ နှင့် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများ ဆက်လက်ရှင်သန် ရပ်တည်ရေးအတွက် အာမခံချက် မရှိပါ။
ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုးကို မြန်မာအစိုးရ အနေနှင့် အသာတကြည် ဖွင့်ပေးဖို့တော့ လတ်တလော အခြေအနေအရ ဖြစ်လာနိုင်စရာ အင်မတန်နဲပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကတိပြုခဲ့သော စကားများအတွက် တာဝန်ယူရဲတဲ့ ဗမာ ခေါင်းဆောင်များ ရှိလာရင်တော့ ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အခုထိတော့ မမြင်နိုင်သေးပေ။ ဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ၊ ကိုယ်တိုင်တိုက်ယူခြင်းမှ တပါး၊ အခြားမရှိပြီ။
တဖက်တွင်လဲ စစ်ရေးအရ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များကို အမြစ်ပြက် ချေမှုန်းဖို့ စိတ်အား ထက်သန်နေတဲ့ လူများလဲ စစ်တပ်ထဲတွင် သာမက ဗမာ အမျိုးသားရေး ခေါင်းဆောင်များ အများအပြားရှိနေလေသည်။ သို့သော် နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာ တိုက်လာခဲ့တယ်၊ အမြစ်ပြက် ချေမှုန်းခရီးဟာ စိတ်ထင်သလောက် မလွယ်မှန်း တချို့က ရိပ်စားမိလာသည်။ စစ်ပွဲများ ဆက်လက်ရှင်သန်နေရင် စစ်အာဏာရှင်များ ပြန် နေရာ ရလာနိုင်ကြောင်းကိုလဲ တချို့ ဗမာ နိုင်ငံရေး သမားများ သိနေသည်။ ဒီအချက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး၊ တိုင်းရင်းသားများ အခွင့်အရေး နှင့် အပေးအယူ ကိစ္စကို တချို့က တွက်ဆထားသည်။ သို့သော်ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဖို့ အချိန်ယူရမည်မှာ မလွဲပေ။ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အခုချိန်မှ မစ နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ နောင် အနှစ် ၅၀ အထက် ပြည်တွင်းစစ် အချိန်ကြာသွားနိုင်သည်။ ဒီကြားထဲ တရုတ်နှင့် အမေရိကန် စစ်ဖြစ်လာလျှင် မမျော်လင့်တဲ့ အဖြစ်မျိုးလဲ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
အခုထိတော့ မြန်မာ အစိုးရ ဗျူဟာကတော့ ဖြောင့်ဖြောင့်သွားနေတုန်းပဲ ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။ ဒါဟာ စီးပွါးရေး အောင်မြင်လာလျှင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ကိစ္စ ချုပ်ငြိမ်းသွားမယ် ဆိုတဲ့ ဗျူဟာ ဖြစ်ပါတယ်။
at 10/24/2012 08:48:00 AM
Myitrum manang ni, “ Goodbye” ngu ai Sau Ka-mai hpe shagawp ai ga shagawp shagun dat ai yaw. Sau Ka-mai hpe marit let yawn hkyen ai kumla hku nna, Shanglawt Tsing palawng chyang hpe n raw hkra hpun nga ai. Nachying yawn ai hte shani shagu sharung shayawt nga ai; lahpawt ai mung n dang tsun hkra re. Majan shiga pyi n lu sagawn mat sai. Raitim, LZ grup-yineM shiga kahtet ai nga nna, shawnglam share Ninghkring ni shana shagu ga nhkun kata kaw rawng, shani sha shinggan pru rai, aten tup maja nga ma ai lam na lu ai. Shawnglam Hpa-awn langai tsun ai; ga nhkun kata rawng ai nau na wa ai majaw, hkum ni grai makret machyi wa ai. Raitim amyu hte mungdanamatu re majaw hkam sharang ai. Hkam jan lu na kyu hpyi nga mit nga tsun ai hpe na la lu ai. Kyu hpyi gaw ashaja nga ga yaw.
Goodbye shakram ai,
Sau Ka-mai hpe hkrai;
Marit shingran mu,
Malap ten n lu.
Nachying manu dan,
Wunpawng shadang nan;
Hpaji Manu wa,
Myuashadang la.
Ngam nga anhte ni,
Nang zawn n byin shi;
Marai 10 atsam,
Nang chyu sha shanyam.
Daini kaw na gaw,
N mu na sai yaw;
Naamalai wa,
Kanang tam la na?
Naata hkang hkrai,
Bungli yawng hkra hprai;
Nang zawn tang du du,
Kadai madu lu?
Bai sa pra rit goi!
Nja dik ai oi!
Goodbye n kam ngu,
Nra myiprwi pru.
Ja lungseng hta grau,
Sak hkrung ten n rau;
Masha she si ai,
Mying n si ndai oi………
မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ ဘာတီးလင့်တ်နာ (Bertil Lintner) နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (အပိုင်း-၁)
at 10/24/2012 02:23:00 AM
by Yangon Press International on Monday, October 22, 2012 at 2:37am ·
အစိုးရအတွက်က ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ လက်နက်ချပြီး အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့ လက်အောက်ကို ၀င်ရောက်ဖို့ပဲ။ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေအတွက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ ပြည်နယ်ရရှိ ဖို့...
(မော်ကွန်းမဂ္ဂဇင်းအမှတ်(၂)တွင်ပါရှိသော အင်တာဗျူးကို ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
ယခုလမော်ကွန်းမဂ္ဂဇင်းတွင် တိုင်းရင်းသားရေးရာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၊ ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုပပျောက်ရေး စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာ့ အရေးကျွမ်းကျင်သူ ဘာတီးလင့်တ်နာ (Bertil Lintner) နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါသည်။
လင့်တ်နာသည် မြန်မာ့အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး နှစ်ပေါင်း များစွာ ရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပြီး အာရှဒေသ၏ သြဇာတိက္ကမကြီး မားခဲ့သော Far Eastern Economic Review ၏ ပင်တိုင် ဆောင်းပါးရှင်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှ ၈၇ အထိ သူ၏ ရှမ်းတိုင်းရင်းသူဇနီးသည်နှင့်အတူ မြန်မာပြည်တွင်းသို့ အိန္ဒိယ ဘက်မှဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နယ်မြေတွင်နေထိုင်ကာ တိုင်းရင်းသားအရေး လေ့လာပြုစုနေသူ ဖြစ်သည်။
ဆွီဒင်လူမျိုး သတင်းစာဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်သည့် လင့်တ်နာသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်ပြီး စာအုပ်ရှစ်အုပ် ထက်မနည်း ရေးသားခဲ့ပြီး ၎င်းင်း၏ နောက်ဆုံးထုတ်စာအုပ်များ မှာ Aung San Suu Kyi and Burma's Struggle for Democracy ဖြစ်ပါသည်။ မကြာသေးမီက ၎င်းအား မြန်မာအစိုးရက အမည်မည်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်ထိ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာမရရှိသေးဟုဆိုပါသည်။ (ယခုအင်တာဗျူးကို ပုံနှိပ်နေချိန်တွင် ဘာတီးလင့်တ်နာဗီဇာရရှိခဲ့သဖြင့် အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ခဲ့သည်။)
တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ ဝေမိုးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင် အခြေစိုက် ဧရာဝတီသတင်းဌာနတွင် သတင်းထောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယခုအခါ အလွတ်တန်း သတင်းစာဆရာ အဖြစ် ရပ်တည်နေသူဖြစ်ကာ လင့်တ်နာအား မေလ ဒုတိယပတ်အတွင်းက ချင်းမိုင်မြို့ တွင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
MAWKUN: မြန်မာပြည်က တုိုင်းရင်းသားပြဿနာတွေဟာ အင်မတန်ရှုပ်ထွေးပြီး ကုိုင်တွယ်ရခက်ခဲပါတယ်။ အမြင်တွေ လည်း တော်တော်လေး ကွဲပြားပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာပြောချင်ပါသလဲ။
LINTNER: ဟုတ်ပါတယ်။ မတူကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေ ရှိနေပါ တယ်။ သဘောတူညီ လက်ခံမှုလည်း မရှိကြပါဘူး။ အဲဒီအထဲက တစ်ခုက ဘာလဲဆိုရင် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသား အုပ်စုတွေက ၁၉၆၂ ခုနှစ်မတိုင်မီကာလရဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စနစ်ဆီကို ပြန်သွားချင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီစနစ်မှာ တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် တွေရှိကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက် ဖက်ဒရယ်မူကို ကျင့်သုံးခဲ့တယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်အထိပေါ့။ အဲဒီ နောက် ဗဟိုချုပ်ကိုင်တဲ့စနစ်ဖြစ်လာတယ်။ ဖက်ဒရယ် ပျောက်သွားတယ်။
ဒီနှစ်ပုိုင်းတွေထဲမှာ စစ်တပ်ဟာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ (အမျိုးသား) ညီလာခံတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဖက်ဒရယ်ကုို လက်မခံဘူး။ ဒါကြောင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြီးတဲ့ နောက်မှာလည်း အများစု သဘောတူညီမှုတွေမရ ရှိခဲ့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူနည်းစု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တွေက ဒီအခြေခံဥပဒေကုို လက်မခံခဲ့ကြဘူးလေ။
ဥပမာ- ကချင်ပြည်နယ်ကို ကြည့်ပါ။ အပစ်အခတ်ရပ်ခဲ့တာ ၁၇ နှစ်ကြာခဲ့တယ်။ ဘယ်သူမှ သူတို့လိုချင်တဲ့ လိုက်လျောမှု တွေ၊ အခွင့်အရေးတွေ မရခဲ့ကြဘူး။ ဒါကြောင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲတာ ပျက်ပြယ်သွားတယ်။ အခြားတိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်တွေနဲ့လည်း ဒီသဘောမျိုးပါပဲ။
ဒါက ပြဿနာဖြစ်နေရတဲ့ ရှုထောင့်တစ်ခုပေါ့။ နောက် တစ်ခုက အယူအဆအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတာပါပဲ။ ပါဝင်တဲ့သူ တွေကလည်း အမျိုးမျိုးကွဲပြားတယ်။ တွေးခေါ်ပုံတွေ မတူကြ ဘူး။ ပြီးတော့ ကိုယ်စားပြုတွေက ကွဲပြားတယ်။ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေကို လက်ခံဖို့နေရာမှာ ကွဲပြားနေကြတယ်။
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့တုို့၊ ရှမ်းပြည်တပ်မတော်၊ ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံးတုိ့ဟာ သူတုို့တုိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အရေးကုို သူတုို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာ လုပ်နေကြသလုို စစ်တပ် ကလဲ သူတုို့ပုံစံနဲ့သူတို့ ဖြေရှင်းဖုို့လုပ်နေတယ်။ အဲဒါကတော့ ဒေသဆုိုင်ရာ ပြည်နယ်နဲ့တုိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်တွေကုို တုိုင်းရင်းသားတွေ ခန့်လိုက်တာပါပဲ။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကေအုိုင်အေနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ကချင်တစ်ယောက်ကုို ၀န်ကြီးချုပ်ခန့်သလုိုပေ့ါ။ ဒီလုိုနဲ့ အာဏာကုို တရားဝင်အောင် တည်ဆောက်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ တုိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့ရဲ့ ဦးတည်ချက်တွေကုိုလည်း ပျက်ပြယ်စေမယ်ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ လက်ရှိအနေအထားက ဒီလူတွေ (၀န်ကြီးချုပ် တွေ) အားလုံးဟာ အပေါ်ကချုပ်ကုိုင်မှုတွေအောက်မှာပဲ အလုပ် လုပ်နေကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
MAWKUN: ကချင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေ ခင်ဗျားရေးသား ခဲ့တယ်။ ကျောက်စိမ်းမြေဆိုတဲ့ စာအုပ်လည်း ထုတ်ခဲ့တယ်။ ကချင်အရေးကို ခင်ဗျားဘယ်လိုမြင်လဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အစိုးရက အခုငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီသစ်ဖွဲ့ထားတယ်။ ဒါက ကချင်ကိုရည်ရွယ်တာမျိုးလို့ ယူဆတယ်။
LINTNER: ဒါဟာ (လက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ) တစ်ဖွဲ့ချင်းလိုက်သဘောမျိုးပါပဲ။ အောက်ခြေမှာတော့ အမျိုးမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်း ရှမ်း ပြည်တောင်ပုိုင်းနဲ့ လုပ်နေတာရှိတယ်။ ကချင်ကိစ္စမှာတော့ ကြည့်ရမယ့် ရှုထောင့်တွေကများတယ်။ အရင်က အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတယ်ဆိုပေမဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ နေ့စဉ် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်တပ်ဘက်က ငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်လိုတဲ့ ဆန္ဒမရှိဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အစိုးရနဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပုံက တခြားသူတွေနဲ့ မတူဘူး။ အစိုးရအတွက်က ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ လက်နက်ချပြီး အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့ လက်အောက်ကို ၀င်ရောက်ဖို့ပဲ။ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေအတွက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ ပြည်နယ်ရရှိ ဖို့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့ တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီ နေပြီ။ ဒါကြောင့် အခြေခံကျကျ ဘုံသဘောတူညီမှုမရနိုင်ကြဘူး။
ဒါကြောင့် အခြေအနေက ပိုခက်ခဲတယ်။ ပိုခက်ခဲနိုင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် နိုင်ငံခြားက ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးလုပ်ကြတဲ့ အဖွဲ့တွေအများအပြား ပါဝင်နေမှု ကြောင့်ပါပဲ။ လူတိုင်းက မြန်မာပြည်ကိုသွားပြီး ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းချင်ကြတယ်။ သူတို့က အပစ်အခတ်ရပ်စဲဖို့ ကိစ္စကလွဲရင် ဘာမှမသိဘူး။
သိပ်မကြာသေးခင်က နော်ဝေအစုိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေး ရန်ပုံငွေဆုိုတာ တည်ထောင်တယ်။ အဲဒီမှာ NGOs တွေကပါ လာပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး အဆုိုပြုလွှာတွေကုို တင်ကြတယ်။ သူတုိုရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အယူအဆအသစ်ကုို လာရောင်းကြတယ်။ ဒီလုို အခြေအနေအရ သူတို့ကုို ကျွန်တော်က ငြိမ်းချမ်းရေးကုန်သည်တွေလုို့ခေါ်ချင်တယ်။ သူတို့လုပ်နေပုံတွေက ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုို့ ခဏလောက်အော်ပြီး ထွက်သွားမယ့်လူတွေပါ ပဲ။ တကယ်တမ်းမှာ မြန်မာပြည်သူတွေ တကယ်ကြုံတွေ့ခံစား နေရတာတွေကုို သိပ်ထည့်တွက်ပုံမရပါဘူး။
ဥပမာအားဖြင့် နော်ဝေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဆုိုပြုလွှာကုို လေ့လာနုိုင်ပါတယ်။ ဒီအဆုိုပြုလွှာဟာ တုိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလောက်ပဲ အဓိကထားနေတဲ့ သဘောဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီထဲမှာ မြေမြှုပ်မုိုင်းဖျက်သိမ်းဖုို့ဆုိုတဲ့ အချက် တစ်ချက်ပါတယ်။ ဒါဟာ တုိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအဖွဲ့ တွေရဲ့ ခံစစ်ကြောင်းကုိုဖြုတ်တဲ့သဘောလောက်ပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်မဖြစ်နုိုင်ပါဘူး။ ဒီလုိုနုိုင်ငံခြား NGO တွေနဲ့အစုိုးရတွေဟာ၊ ဥပမာအားဖြင့် နော်ဝေရဲ့ဟာပေါ့။ အလုပ် မဖြစ်ပါဘူး။ သူတုို့က တုိုင်းရင်းသား ပြဿနာကြီးထွားပေါက်ကွဲ ထွက်လာတဲ့ဟာကုို သဘောမပေါက်ကြဘူး။
ဘာကြောင့် ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီး စစ်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာ သူတို့လုံးဝနားမလည်ကြဘူး။ သူတို့ရဲ့အဖြေရှာမှုက စာရွက်ပေါ်မှာအမြင်လှဖုို့ပဲရှိနေတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင် ဒါဟာ ပိုဆိုးတယ်လို့မြင်တယ်။ အဲဒီမှာ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ အကြံပေးတွေ၊ စာရေးဆရာတွေ၊ စေ့စပ်ရေးမှူးတွေ ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်။ သူတုို့ ဘာတွေလုပ်၊ ဘာတွေပြောနေတယ်ဆုိုတာ ဘယ်သူတွေ နဲ့စကားပြောနေတယ်ဆုိုတာ နားမလည်နုိုင်သလောက်ပါပဲ။
MAWKUN: ဒါဆိုခင်ဗျားက နော်ဝေငြိမ်းချမ်းရေး အဆို တင်သွင်းတဲ့ အဖွဲ့မျိုးကို ရည်ညွှန်းချင်တာပေါ့။ သူတို့က အဲဒီလိုပုံစံမျိုးကို ပိုပြီးတော့ပြောကြတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို နည်းနည်းထပ်ပြီး ရှင်းပြပေးပါဦး။ ပြီးတော့ခင်ဗျားရဲ့ ရှုမြင်ချက်ကဘယ်လိုရှိသလဲ။
LINTNER: သူတို့က အချိန်ဖြုန်းတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ် ငန်းစဉ်တစ်ခုကို ထူထောင်လိုက်တာပဲ။ လူတိုင်းဆီကငွေကို တောင်းခံနေတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအရာရှိ အားလုံးကိုခေါ်မယ်။
၂၀၀၇ မှာ နှင်ထုတ်ခံရတဲ့ ချားလ်စ်ပတ်ထရီ (Charles Petrie) (၂၀၀၃ ကနေ နှင်ထုတ်မခံရမီအချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကုလဌာနေကိုယ်စားလှယ်လုပ်သွားသူ) ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကို တော်တော့်ကို မမြင်တတ်လွန်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။ သူပြောဖူးတာ တစ်ခုရှိတယ်။ သူက သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုဟာ အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ အရေးမကြီးဘူး။ လက်မခံနိုင် ဘူးလို့ဆိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကလူတွေရဲ့ နေထိုင်မှုဘ၀ ဟာ အလွန်ဆိုးရွားလာနေပြီဖြစ်လို့၊ တချို့လူတွေဟာ လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြကြတာလို့ သူပြောလိုက်တာမှာ သူမှားသွားတယ် ပေါ့ဗျာ။
သူက မြန်မာပြည်အကြောင်းကို ဘာမှမသိတဲ့သူပါ။ သူ လုပ်ခဲ့တာက တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတစ်မျိုးထက် မပိုပါဘူး။ ဒါမျိုး တွေကလည်း လုပ်ခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ သူတုို့တွေက မြန်မာပြည်ဟာ ဗဟုိုချုပ်ကုိုင်မှုကုို ဦးစားပေးတဲ့ ပုံစံမျိုးသွားမလား၊ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကုို သွားမလား ဆုိုတာကုိုပဲ ထပ်ဆွေးနွေးနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလုိုအဆုိုပြုလွှာတွေဟာ အဓိကပြဿနာဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကုိုတောင် ရည်òန်းပြောတာ မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ အရေးကြီးတဲ့ ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေခံဥပဒေကုို အကြောင်းပြပြီး စစ်တပ်က တုိုင်းရင်းသား လက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့ တွေကုို အင်အားသုံးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှာတော့ သူတို့ရဲ့အဆိုပြုလွှာဟာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ အုပ်စုတွေကို လက်နက်ချဖို့ တောင်းဆိုနေ တာထက် သိပ်မပိုလှပါဘူး။ ဒါက အစိုးရကလိုချင်နေတာနဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျနေတာပေါ့။ ငြိ်မ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ နောက် ခံတွေကုို ပြန်ကြည့်မယ်ဆုိုရင် ၁၉၆၂ အာဏာသိမ်းမှုနောက် ပုိုင်းက လက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ စခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၃၊ ၁၉၆၄ ကာလတွေကပေါ့။ ကချင်နဲ့အစုိုးရကြားက စကားပြောမှုကတော့ ၁၉၈၀ မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်။ အဲဒီအချိန် က ကေအိုင်အိုဥက္ကဋ္ဌ ဘရန်ဆုိုင်း ရန်ကုန်အထိသွားပြီး ဗိုလ်ချုပ် နေ၀င်းနဲ့တွေ့တယ်။ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကို တရုတ်နုိုင်ငံက ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးခဲ့တာပါ။
တရုတ်အစိုးရက မြန်မာပြည်အရေးမှာ နော်ဝေနိုင်ငံထက် သြဇာသက်ရောက်မှု အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပွဲက မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ အမြင်ကွဲပြားမှုတွေကြောင့် မညှိနှိုင်းနုိုင်ခဲ့လုို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတော့ တစ်ဖက်က ဗဟုိုချုပ် ကုိုင်တဲ့နိုင်ငံအနေနဲ့ သွားချင်တယ်။ တစ်ဖက်က ဖက်ဒရယ် ပြည် ထောင်စုအနေနဲ့ သွားချင်တယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့ကို တပ်ရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီး အိမ်ပြန်ကြဖို့ပဲပြောနေကြတယ်။ ဒါက ပိုဆိုးသွားပါတယ်။ ဘာမှ မထူးခြားဘူး။ ဒါပမဲ့ တချို့တွေက ငွေတွေ အများကြီးရလိုက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်လာတယ်။
MAWKUN: အစိုးရဘက်က စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဦးအောင်မင်းနဲ့ နော်ဝေအဖွဲ့က ဖွံ့ဖြိုးတိုက်တက်မှု စီမံကိန်းတွေ အဲဒီဒေသမှာ လုပ်ပေးဖို့ ပြောနေကြတယ်။ တိုးတက်မှုတွေ ရှိလာရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကို အာမခံချက်ပေးနိုင်မယ်လို့ မြင်ကြ တယ်။ ခင်ဗျားအမြင်ရော ဘယ်လိုလဲ။
LINTNER: အဲဒီလို မဟုတ်ဘူးဗျ၊ သူတို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာ နောက်ထပ်ကျောင်းတွေ ဆေးရုံတွေ၊ လမ်းတွေ ရလာဖို့ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုတောင်းနေကြတာပါ။ တံတားတွေ၊ လမ်းတွေဆောက်ပြလည်း ထူးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလူတွေက သူတို့မှာ သီးခြားကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုတာကို သိတယ်။ ဒါကို လိုချင်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ရပုိုင်ခွင့် တွေ သီးခြားအမှတ်အသား ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသ ရှိနေတာကို အသိအမှတ်ပြုစေချင်တယ်။
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ကြည့်ကြမယ်။ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲ ဟာ တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှုရှိတယ်။ NLD က နေရာအများစုမှာ အောင်ပွဲခံခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ အမတ်နေရာ တော်တော်များများမှာ ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အမတ်နေရာ အများအပြားရတယ်။ ရခုိုင်မှာဆုိုရင်လဲ ရခုိုင်ပါတီ တွေ အနုိုင်ရခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ရင် သူတို့မှာ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရမယ့် သီးခြားကိုယ်ပိုင်ဝိသေသ ရှိတယ်ဆိုတာ တွေ့ရတယ်။ မြန်မာပြည် တိုင်းရင်းသားညီညွတ်မှုရရှိရေး ဘယ်လို တည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟောင်းကြီး ထပ်ပြီးထင်ဟပ် ပြနေတယ်။
ကျောင်းတွေ ထပ်ဆောက်မယ်ဆုိုရင်လည်း မြန်မာစာ တွေကုိုပဲ တုိုင်းရင်းသားနယ်တွေမှာ သင်ခုိုင်းတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဘယ်ကုိုမှဦးတည်နုိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေသအတွင်းဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပါလို့ အကြံပေးရတာ အလွန် လွယ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေရဲ့ကုိုယ်ပုိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရဖုို့ဆုိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကတော့ သီးခြားအကြောင်းတစ်ခုပါ။ အရှေ့တီ မောကို ဥပမာအဖြစ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အရှေ့တီမောဟာ ၁၉၇၅ ခုနှစ်မှာ လွတ်လပ်ရေးတောင်းတယ်။ ပေါ်တူဂီကိုလိုနီအောက် မှာ နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးနေခဲ့ရတယ်။ ကိုလိုနီစနစ်က သူတို့ကို လျစ်လျူရှုထားခဲ့တယ်။
နောက်နှစ် ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာ အင်ဒိုနီးရှားက အရှေ့တီမောကို သိမ်းယူခဲ့တယ်။ အရှေ့တီမောမှာ အဲဒီအချိန် စာမတတ်သူ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားအုပ်ချုပ်တဲ့ ၂၅ နှစ်အတွင်းမှာ စာမတတ်မြောက်သူ အတော်နည်းသွားတယ်။ ကျောင်းတွေ၊ လမ်းတွေ၊ ဆေးရုံတွေအများကြီးကို ဆောက်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အရှေ့တီမောရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းက လွတ်လပ်ရေးကို တောင်းဆို နေဆဲပါပဲ။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေ ရှိလာရုံနဲ့ လူတွေရဲ့ စိတ်ကို မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။
MAWKUN: တုိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့အစုိုးရရဲ့ ကုိုယ်စားလှယ် ဗုိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ကုို အရေးယူပြီးတဲ့ နောက် ပုိုင်းမှာ တိကျတဲ့လူဆုိုပြီးမရှိခဲ့ဘူး။ နောက်ပုိုင်း ဒု-ဗုိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်ကုို တာဝန်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူလည်း တုိုင်းရင်းသားတွေ နဲ့ အောင်မြင်အောင် ညှိနှိုင်းမှု မလုပ်နုိုင်ခဲ့ဘူး။ ဦးသိန်းစိန် သမ္မတ ဖြစ်ပြီးနောက်ပုိုင်း ဦးအောင်သောင်း၊ ဦးအောင်မင်း အစရှိတဲ့ သူတွေကို တာဝန်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လုို့ဘယ်လုို သုံးသပ်မိလဲ။
LINTNER: ဒီလိုအဖွဲ့ ခွဲထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးပန်း တိုင်က ဘာလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ပါ။ ဦးအောင်သောင်း ဒါမှ မဟုတ် ဦးအောင်မင်းတုို့က တာဝန်ယူတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ အစိုိုးရဘက်က စေ့စပ်ရေးမှူးတွေ ရည်မှန်းချက်က ဗဟုိုအစိုးရရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကို အားလုံးရောက်လာဖုို့ပဲ။ အဲဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ် က တုိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့တွေကုို အပြီးသတ်ချေမှုန်း တဲ့ သဘောပါပဲ။ အစိုးရကနည်းမျိုးစုံနဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေကို ရှင်းနိုင် တယ်။ ဆွေးနွေးလိုက်၊ တိုက်လိုက်။ တိုက်လိုက်၊ ဆွေးနွေးလိုက် ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဦးအောင်မင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ဦးအောင်သောင်းဖြစ်ဖြစ် တုိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကုို ကျွန်တော်တုို့ အခြေခံဥပဒေကုို အတူတူပြောင်းကြရအောင်လုို့ပြောမယ့်ပုံ မတွေ့ ရသေးပါဘူး။
သူတို့စိတ်ထဲမှာ ပြည်နယ်အစိုးရသစ်ဟာ ပြည်နယ်လူထု ကို ကိုယ်စားပြုနေပြီ။ တစ်ဖက်မှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကုို ဖယ်ထုတ်ထားမယ်။ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေကို ချေဖျက်ပစ်ရမယ်။ တစ်ဖက်မှာ လက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့တွေက ဒါကုို လက်မခံကြဘူး။ ဒီလုို အခြေအနေတွေကြောင့် ဘုံသဘောတူညီ မှု မရနိုင်ဘူးပေါ့။
MAWKUN: ဒါဆိုို ခင်ဗျားဆုိုလုိုချင်တာက အစုိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးစကားပွဲတွေလုပ်ပြီး အချိန်ဝယ်နေတယ်လုို့ ပြောချင်တာလား။
LINTNER: ဟုတ်ပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတာက သေနတ် မုိုးထားတဲ့ စကားဝုိုင်းလုိုဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ရဲ့တာဝန်က လက် နက်ကိုင် အုပ်စုတွေကိုအဆုံးသတ်ပြီး နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ အစိုးရကပြောတဲ့ ဥပဒေဘောင် အတွင်းဝင်လာဖုို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ စိတ်ကြိုက်ရွေးထား တဲ့ ပြည်နယ်အစုိုးရတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရက နိုင်ငံရေး အရ ဖြေရှင်းပုံ၊ ဖြေရှင်းနည်းတွေကို ယုံယုံကြည်ကြည် မလုပ် သေးဘူးလုို့ဆုိုရမယ်။
MAWKUN: မကြာသေးခင်က ဦးအောင်မင်း နော်ဝေ၊ ဆွစ်ဇာလန်တို့ကိုသွားတယ်။ သူတို့ပြန်လာတော့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရက ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီသစ်တစ်ခုဖွဲ့တယ်။ ဒါဟာ နော်ဝေဖိအားလို့ ပြောနိုင်မလား။
LINTNER: မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဒါက ကစားပွဲတစ်ခု၊ လှည့် ကွက်တစ်ခုပါပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပြောင်းချင် ပြောင်းမယ်။ သူတိုရဲ့ အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်ကတော့ ပြောင်း လဲမှာ၊ စွန့်လွှတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေကို ချေမှုန်းပြီး သူတို့ရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကို ဆွဲသွင်းဖို့ပါပဲ။
MAWKUN: နုိုင်ငံတကာ၊ ဥပမာ-နော်ဝေတုို့ရဲ့ ပါဝင် ပတ်သက်မှုတွေရော ဘာထပ်ပြောချင်သေးလဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေး ရနုိုင်မလား။
LINTNER: ငြိမ်းချမ်းရေး ဘယ်လိုရနိုင်မလဲဗျာ။ အခုအထိ အခြေခံပြဿနာရပ်တွေကို ထည့်ပြီးမဆွေးနွေးသေးဘူး။ ဖက်ဒရယ် စနစ်ရှိရမယ့်အစား ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ်ကုို ပထမအဆင့်မှာ ဆက်ထားနေသေးတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်တာဟာ ရူးနှမ်းတဲ့ကိစ္စပဲ။ တကယ့်အမှန်က အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရက အလွန်ကို သိမ်မွေ့တဲ့ ကစားနည်းတစ်မျိုးကို ကစားနေတာပါ။ လေးနက်တဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်နေပြီလို့ နို်င်ငံခြားသားတွေ ယုံကြည်အောင် လုပ်ပြနေကြတာပါ။ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေကတော့ သူတို့ကို ဖိအားပေး လှုပ်ရှားနေတာ ပဲလို့သိကြတယ်။
MAWKUN: ဒါဆုို တစ်ခုမေးချင်တာက SSA- South (ရှမ်းပြည်တပ်မတော် - တောင်ပိုင်း) တုို့၊ KNU တုို့က အခု တလော ဦးအောင်မင်းနဲ့ သဘောတူလက်မှတ်ထုိုးဖုို့ စုိုင်းပြင်း နေကြတာ ဘာကြောင့်လဲ။ သူတုို့မှာ ဘာအကျပ်အတည်းတွေ ရှိလုို့လဲ။
LINTNER: သူတုို့က စကားဝိုင်းတွေကနေ နုိုင်ငံရေးအရ အဖြေထွက်မယ်လုို့ ယုံကြည်နေပုံရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုဆုိုရင် သူတုို့ ကချင်ပြဿနာကုို လေ့လာသင့်တယ်။ ကချင်တွေဟာ ဒီလုို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွေကနေ နုိုင်ငံရေးအရ အဖြေရှာလုို့ ရမယ်ဆုိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တာ ၁၇ နှစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဘာမှ မရခဲ့ဘူး။ အစိုးရက သူတုို့လုိုချင်တာ တွေကုိုသာ လုိုသလုို ဆုံးဖြတ်သွားခဲ့တယ်။ ဦးအောင်မင်းက ပြောဆိုဆက်ဆံလို့ကောင်းတယ်။ ဒါ ကြောင့် သူနဲ့စကားပြောရင် အဆင်ပြေတာလောက်နဲ့ ငါတုို့ တုိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရည်မှန်း ချက်တွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ ရမယ်လုို့ ဆုံးဖြတ်လုို့မရပါဘူး။ ဘာ လုို့လဲဆုိုတော့ ဦးအောင်မင်း စတဲ့ အစုိုးရစေ့စပ်ရေးမှူးတွေဟာ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု အယူအဆထက်စာရင် ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေကုို လုိုက်နာရသူတွေဖြစ်တယ်။ တုိုင်းရင်းသားတွေရဲ့  လူမျိုးစု အခွင့်အရေးတွေကုို အာမ မခံနုိုင်ပါဘူး။
One Kachinalak lai ai nsen (1)ကချင်လူငယ်ကွန်ဖရင်...
Toward 2015 - 42 (Part1/2) - Reformed Burma ( vide...
ဘာတီးလင့်တ်နာ မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ ဘာတီးလင့်တ်န...
Secretary-General Ban Ki-moon and PSY, Korean sing...
(52) ning hpring, KIO Masat N'htoi htaeGinjaw Ko...
Rev.Dr.Maran Ja Gun 21Oct,2012, At Kachin Church B...
Tsaw Ra Ai Mawmau Bum
အကြီးတွေ ချန်ထားခဲ့တဲ့ အမှိုက်ပုံ
Myanmar wins Missosology's People's Choice Award
Missososology's Miss International 2012 FINAL PRED...
Laika ka ka sara ning hkring Sara Kaba Sau Kamai a...
Gaw Rai Na Kun
Laika ka sara ninghkring kaba Hpau Wung Tang Gun (...
“တော်တော်ပျံ တော်တော်ဝဲတဲ့ သမ္မတလူချောအဖွဲ့ ” (ဦးဝ...
Sumtsaw niamakau grup-yin(matut2)
မြန်မာအစိုးရတပ် လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကချင်ပြ...
Myanmar ethnic groups meet in Tokyo
ကချင်ပြည် အကြောင်းပြောပြနေတဲ့ တရုပ်ပြည်တွင်းမှ ကချ...
Aung La N Sang's fight dedicating Kachin Refugee.
Shingran N mu
Hpyi Nem Ai Ga
HPakant Ginwang Pati Komit Rung kawn ndau lai ka
ကချင် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဖလှယ်ရေးရုံး ဖွင်...
"ရှေ့ဘုရင်ခေတ်က မြန်မာဘုရင်များနှင့် ကချင်လူမျိုးမ...
ဖားကနျ့ မွို့နယျ လုံးခငျး ရှာမှာ တိုကျပှဲဖွဈ
ရွှဦးထိပ် က ပြောင်ပြောင်
Ga Sadi Jaw Ai
Super A Super
UNFC Dat Kasa Ni US States Department Salang Ni Ht...
New Roots spiked with chilis
Hkanghtan Mangbya A Labau
Lahkrip Ra Ra
Jinghpaw Kasa web nnan pru sai
Myen Myusha Myit Hkrum Lam
Wunpawng Mungdan Ngwi Pyaw Ginra ( Sumla hkrung )
မြန်မာပြည်မှာ မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အဝရှိပါပြီh...